Tag: bandhigga cms
Wednesday, May 12, 2010 Axad, Oktoobar 4, 2015 Michael Reynolds
Waxaan ku faraxsanahay inaan ka hadlo CMS Expo usbuucii hore ee Chicago. Tani waxay ahayd markii iigu horreysay ee aan kaqeybgalo shirkaan mana aanan hubin waxa laga filan karo. Aad baan ula yaabay sida ay u weyneyd. Bandhigga CMS waa kulan barasho iyo ganacsi oo loogu talagalay Nidaamyada Maareynta Mawduucyada iyo adeegyada bogagga. Waxay soo bandhigeysaa dhowr wado oo xuddun u ah meheradaha ganacsiga iyo teknolojiyadda. Shanta track sanadkaan